Air-Cushion Headbox, ဖိအားပေးမှုဟောင်းများ, တရုတ်အတွက်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူဖွဲ့စည်း
ဖေါ်ပြချက်:Air-Cushion Headbox,ယခင်ဖိအားပေးမှု,ဖွဲ့စည်းခြင်းဘုတ်အဖွဲ့,ဆလင်ဒါမှို,ရေဆိုး Element ကို,ထိပ်တန်းဟောင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက္ကူစက်ဝါယာကြိုးပုဒ်မပစ္စည်းကိရိယာများ
စက္ကူစက်ဝါယာကြိုးပုဒ်မပစ္စည်းကိရိယာများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Air-Cushion Headbox, ယခင်ဖိအားပေးမှု ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဖွဲ့စည်းခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
စက္ကူထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကြွေရေဆိုးပစ္စည်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kraft စက္ကူစက်အတွက်ဖုန်စုပ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Dewatering Element တွေကိုကြွေဖွဲ့စည်းရေးဘုတ်အဖွဲ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသော Density ကြွေရေဆိုးရေနုတ်မြောင်းလေမှုတ်စက်ခြောက်သွေ့ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း Element တွေကိုအဖုံးများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ချေးခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်သောကြွေထည်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကြွေစုတ်ယူခြင်းအဖုံးဖုံးစက္ကူပြုလုပ်ခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြွေထည်ပစ္စည်းဖုန်စုပ်စက်စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
0.92-0.97g / cm3 လေဟာနယ်ကြွေထည်မြေထည်စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hydrofoil Dewatering Element တွေကိုစုတ်ယူရန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Dewatering လေဟာနယ်ကြွေထည်မြေထည်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းအကွေ့အကောက်များသောအမျိုးအစားဆလင်ဒါမှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်ရုံအက်စ်အက်စ်ဆလင်ဒါမှိုစက္ကူစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိ String ချစ်ပ်အမျိုးအစား Cylinder မှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူအောင်များအတွက် 304 ဆလင်ဒါမှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်သံမဏိ Winding အမျိုးအစား Cylinder မှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူလုပ်ခြင်းအတွက်စက္ကူစက် SS ဆလင်ဒါမှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
1.5m နှင့်အတူသံမဏိဆလင်ဒါမှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
100-400m / min ပွင့်လင်းအမျိုးအစား Headbox  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်မှု 1.5.5 မီလီမီတာဆလင်ဒါမှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူဟိုက်ဒရောလစ် HeadBox စက္ကူလုပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူ Air Cushion Headbox  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Supply နိုင်ခြင်း: 360 sets per year
စက္ကူထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကြွေရေဆိုးပစ္စည်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1. ပွန်းစားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရာ fourdrinier စားပွဲတင် application ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ပွန်းပဲ့နယ်မြေများအောက်တွင်ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း။ စက္ကူစက်ကြွေထည်မြေထည်စုပ်စက်အဖုံး...
Kraft စက္ကူစက်အတွက်ဖုန်စုပ်စက် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1. ပွန်းစားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရာ fourdrinier စားပွဲတင် application ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ပွန်းပဲ့နယ်မြေများအောက်တွင်ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း။ စက္ကူစက်ကြွေထည်မြေထည်စုပ်စက်အဖုံး...
Dewatering Element တွေကိုကြွေဖွဲ့စည်းရေးဘုတ်အဖွဲ့
Dewatering Element တွေကိုကြွေဖွဲ့စည်းရေးဘုတ်အဖွဲ့ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1. ပွန်းစားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရာ fourdrinier စားပွဲတင် application ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ပွန်းပဲ့နယ်မြေများအောက်တွင်ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း။ စက္ကူစက်ကြွေထည်မြေထည်စုပ်စက်အဖုံး...
မြင့်မားသော Density ကြွေရေဆိုးရေနုတ်မြောင်းလေမှုတ်စက်ခြောက်သွေ့ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း Element တွေကိုအဖုံးများ
မြင့်မားသော Density ကြွေရေဆိုးရေနုတ်မြောင်းလေမှုတ်စက်ခြောက်သွေ့ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း Element တွေကိုအဖုံးများ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1. ပွန်းစားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရာ fourdrinier စားပွဲတင် application ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်...
ချေးခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်သောကြွေထည်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1. ပွန်းစားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရာ fourdrinier စားပွဲတင် application ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ပွန်းပဲ့သောနေရာများအောက်တွင်ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း။...
စက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကြွေစုတ်ယူခြင်းအဖုံးဖုံးစက္ကူပြုလုပ်ခြင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1. ပွန်းစားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရာ fourdrinier စားပွဲတင် application ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ပွန်းပဲ့နယ်မြေများအောက်တွင်ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း။...
ကြွေထည်ပစ္စည်းဖုန်စုပ်စက်စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1. ပွန်းစားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရာ fourdrinier စားပွဲတင် application ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ပွန်းပဲ့သောနေရာများအောက်တွင်ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း။ စက္ကူစက်ကြွေထည်မြေထည်စုပ်စက်အဖုံး...
0.92-0.97g / cm3 လေဟာနယ်ကြွေထည်မြေထည်စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း
0.92-0.97g / cm3 လေဟာနယ်ကြွေထည်မြေထည်စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1. ပွန်းစားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရာ fourdrinier စားပွဲတင် application ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ပွန်းပဲ့သောနေရာများအောက်တွင်ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း။...
Hydrofoil Dewatering Element တွေကိုစုတ်ယူရန်
Hydrofoil Dewatering Element တွေကိုစုတ်ယူရန် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1. ပွန်းစားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရာ fourdrinier စားပွဲတင် application ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ပွန်းပဲ့နယ်မြေများအောက်တွင်ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း။ စက္ကူစက်ကြွေထည်မြေထည်စုပ်စက်အဖုံး...
Dewatering လေဟာနယ်ကြွေထည်မြေထည်စက် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1. ပွန်းစားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရာ fourdrinier စားပွဲတင် application ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ပွန်းပဲ့နယ်မြေများအောက်တွင်ရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်း။ စက္ကူစက်ကြွေထည်မြေထည်စုပ်စက်အဖုံး...
စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းအကွေ့အကောက်များသောအမျိုးအစားဆလင်ဒါမှို စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းအကွေ့အကောက်များသောအမျိုးအစားဆလင်ဒါမှိုဖော်ပြချက် စက္ကူပြုလုပ်ရန်စက်အတွက်ဆလင်ဒါမှိုသည်အလယ်ပိုင်းအချင်းကိုယ်ထည်၊ HT150 ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ သံမဏိဘားနှင့်ခါးပတ်၊ အပြင်ဘက်အချင်း...
စက္ကူစက်ရုံအက်စ်အက်စ်ဆလင်ဒါမှိုစက္ကူစက် စက္ကူစက်ရုံအက်စ်အက်စ်ဆလင်ဒါမှိုစက္ကူစက်ဖော်ပြချက် စက္ကူပြုလုပ်ရန်စက်အတွက်ဆလင်ဒါမှိုသည်အလယ်ပိုင်းအချင်းကိုယ်ထည်၊ HT150 ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ သံမဏိဘားနှင့်ခါးပတ်၊ အပြင်ဘက်အချင်း ၁၅၀၀ မီလီမီတာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။...
သံမဏိ String ချစ်ပ်အမျိုးအစား Cylinder မှို
သံမဏိ String ချစ်ပ်အမျိုးအစား Cylinder မှို သံမဏိ String ချစ်ပ်အမျိုးအစား Cylinder မှိုထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် စက္ကူစက်များအတွက်စက္ကူပြုလုပ်ရန်စက်အတွက်စက္ကူလုပ်ခြင်း၊ ၀ တ်စုံ၊ စကိတ်နှင့်နဂိုအတိုင်းဖြစ်သည့်စက္ကူများ၊ အဓိက ၀...
စက္ကူအောင်များအတွက် 304 ဆလင်ဒါမှို
စက္ကူအောင်များအတွက် 304 ဆလင်ဒါမှို စက္ကူအောင်များအတွက် 304 ဆလင်ဒါမှို ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ စက္ကူစက်များအတွက်စက္ကူပြုလုပ်ရန်စက်အတွက်စက္ကူလုပ်ခြင်း၊ ၀ တ်စုံ၊ စကိတ်နှင့်နဂိုအတိုင်းဖြစ်သည့်စက္ကူများ၊...
စက္ကူစက်သံမဏိ Winding အမျိုးအစား Cylinder မှို
စက္ကူစက်သံမဏိ Winding အမျိုးအစား Cylinder မှို စက္ကူစက်သံမဏိ Winding အမျိုးအစား Cylinder မှို ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ Cylinder မှိုသည်စက္ကူဖွဲ့စည်းသည့်ကိရိယာတစ်ခု၊...
စက္ကူလုပ်ခြင်းအတွက်စက္ကူစက် SS ဆလင်ဒါမှို
စက္ကူလုပ်ခြင်းအတွက်စက္ကူစက် SS ဆလင်ဒါမှို အက်စ်အက်စ်ဆလင်ဒါမှိုဖော်ပြချက် စက္ကူပြုလုပ်ရန်စက်အတွက်ဆလင်ဒါမှိုသည်အလယ်ပိုင်းအချင်းကိုယ်ထည်၊ HT150 ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ သံမဏိဘားနှင့်ခါးပတ်၊ အပြင်ဘက်အချင်း ၁၅၀၀ မီလီမီတာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။...
1.5m နှင့်အတူသံမဏိဆလင်ဒါမှို Stainless Cylinder မှိုထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် စက္ကူထုတ်လုပ်သည့်စက်အတွက်စ တီးလ်မှိုမှို ၊ ၀ ိုင်၊ ချည်၊ စပီနှင့် Spacers များအပါအ ၀ င်အဓိက ၀ င်ရိုးတွင်တူညီသောအကွာအဝေးများရှိသည့်သံမဏိပြားများ၊...
100-400m / min ပွင့်လင်းအမျိုးအစား Headbox
ထုပ်ပိုး: ပို့ကုန် Stander
100-400m / min ပွင့်လင်းအမျိုးအစား Headbox 1.Headbox ဖော်ပြချက် စက္ကူထုတ်လုပ်သည့်စက်တွင် Fourdrinier ပွင့်လင်းသော type headbox သည်စက္ကူစက်၏သော့ဖြစ်သည်။...
စက္ကူစက်မှု 1.5.5 မီလီမီတာဆလင်ဒါမှို
စက္ကူစက်မှု 1.5.5 မီလီမီတာဆလင်ဒါမှို 1.5m ဆလင်ဒါမှိုဖော်ပြချက် စက္ကူပြုလုပ်ရန်စက်အတွက်ဆလင်ဒါမှိုသည်အလယ်အချင်းကိုယ်ထည်၊ HT150 ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ သံမဏိဘားနှင့်ခါးပတ်နှင့်အပြင်ဘက်အချင်း ၁၅၀၀ မီလီမီတာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။...
စက္ကူဟိုက်ဒရောလစ် HeadBox စက္ကူလုပ်
စက္ကူဟိုက်ဒရောလစ် HeadBox စက္ကူလုပ် ဖော်ပြချက်အောင် 1. စက္ကူဟိုက်ဒရောလစ် HeadBox စက္ကူ Head Box သည် စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများ ကဲ့သို့အလွန်အရေးကြီးသည် ၊ Pulper ပစ္စည်းကိရိယာများမတိုင်မှီ အသုံးပြု၍...
စက္ကူ Air Cushion Headbox
စက္ကူ Air Cushion Headbox 1.Air Cushion အမျိုးအစား Headbox ဖော်ပြချက် Headbox ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ feed pump မှ stock ကိုယူပြီးစက္ကူစက်နှင့်အညီညီမျှသောစတုဂံပုံဥတုနှင့်စက်သို့ ဦး တည်သည့်တူညီသောအလျင်၊ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ဖိအားကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ စက္ကူစက်ဝါယာကြိုးပုဒ်မပစ္စည်းကိရိယာများ ပေးသွင်း
HUTAO GROUP သည် Air-Cushion Headbox၊ Pressurized Former၊ Forming Board၊ Cylinder မှို၊ Dewatering Element၊ Top Former၊ Vacuum Box Cover, Felt Suction Box ပါသည့်စက္ကူစက်ဝါယာကြိုးအပိုင်းအတွက်စက္ကူစက်ဝါယာကြိုးအပိုင်းအမျိုးမျိုးအတွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Air-Cushion Headbox ယခင်ဖိအားပေးမှု ဖွဲ့စည်းခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ ဆလင်ဒါမှို ရေဆိုး Element ကို ထိပ်တန်းဟောင်း Air Cushion Headbox carton card board